यस्तो छ नेपालको नामाकरणदेखि २०७२ सम्मको इतिहास – Kathmandutoday.com
यस्तो छ नेपालको नामाकरणदेखि २०७२ सम्मको इतिहास
काठमाण्डु टुडे २०७२ असोज २८ गते १५:४७ मा प्रकाशित
एसियाका ठूला देशहरु चीन र भारतको बीचमा हिमालको काखमा रहेको देश हो नेपाल । यहाँको भूगोल, हावापानी, संस्कृति, चालचलन अन्य राष्ट्रको भन्दा फरक रहेको छ । यससँगै नेपालको इतिहास पनि फरक छ । नेपाल दक्षिणतिर रहेका देशहरु अन्य देशको अधिनमा रहँदा पनि स्वतन्त्र रहँदै आएको छ ।
नेपाल शब्द कहाँबाट र कसरी आयो भन्नेमा एकिन तथ्यांक छैन । तर, पनि नेपाल हिमालयको काखमा भएका कारण नेपाल नामको उत्पत्ति ‘निपालयबाट भएको विश्वास गरिन्छ । साथै नेपाल शब्द तिब्बती भाषा ‘नियमपालबाट आएको भन्ने पनि गरिन्छ । जसको अर्थ पवित्र भूमि भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा ऊनको उत्पादन हुने र ऊन राख्नलाई तिरपालको प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यसैले ऊनको अर्थ ने र तिरपालको अर्थ पालबाट नेपाल बनेको पनि भन्ने गरिनछ ।
नेपालको प्राचिन इतिहास
किराँत कालः काठमाण्डु उपत्यकामा उत्खननका क्रममा भेटिएका नियोलिथिक उपकरणहरुबाट नेपालमा ९ हजार वर्ष पहिलेदेखि मानिसहरु बस्ने गरेको अनुमान लगाइन्छ । त्यसैअनुसार किराँत जातिका मानिसहरु करिब २५ सय वार्षअघि देखि यहाँ बसोसा गरेको अनुमान लगाइन्छ ।
किराँती पहाडि र जंगलीको एक जनजाती हो । उनीहरु मध्य एसिया, भारत र हिमालबाट आएर बस्न थालेका थियो । तर, किरात कालभन्दा अघि पनि नेपालमा गोपाल, महिषपाल जस्ता जाति भएको अनुमान लगाइनछ । तर, यसबारे कुनै पुष्टि भने हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको इतिहासमा किराँत काललाई मुख्य मानिन्छ जुन समयमा किरात राजाको रुपमा यलम्बर राजा थिए भन्ने केही लिखित प्रमाणहरु हामीसामू रहेका छन् ।
लिच्छवी कालः सन् ४०० देखि ७५० सम्म काठमाण्डुमा लिच्छवीहरुले शासन गरेको इतिहास हामीसामू छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लेख गरिएअनुसार वेशलीबाट भागेर आएका वीर पुरुषले किराँतीरुलाई खेदेर काठमाण्डुमा आफ्नो शासन जाएका थिए । त्यससमयमा पाइएको शिलालेख, मुद्रा र चाँगुनारायण मन्दिरको अभिलेखबाट मानदेव लिच्छवीकालमा प्रथम राजा भएको प्रमाण भेटिन्छ । लिच्छवीहरुले किराँतीलाई लखेटेर गण्डकीदेखि कोशीसम्मको भूभागमा राज्य संचालन गरेका थिए ।
मल्ल कालः वि.सं. १७९९ मा गोरखाका राजा नरभुपाल शाहको निधन भएपछि राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको सोचसँगै एकीकरणको प्रयास सुरु भयो । उनले प्रथम पटक वि.सं. १८०० मा नुवाकोट आक्रमण गरे तर, पराजित भए । त्यसपछि फेरि एक वर्षपछि त्यहाँ आक्रमण गरी उनले विजय हासिल गरे । त्यसपछि वि.सं. १८१४ र २१ मा कीर्तिपुर आक्रमणमा हार ब्यहोरे । कालु पाण्ड मारिएको युद्ध यही हो । वि.सं. १८२२ चैत ३ गते उनले फेरि कीर्तिपुरमा आक्रमण गरे र जित हात पारे । उनले १८२५ मा काठमाण्डुमा आक्रमण गरे र जित हात पारे । त्यसपछि उनले क्रमशः ललितपुर र भक्तपुरमा आक्रमण गरे । जुन १८२५ र २६ मा गरिउको थियो । त्यसमा पनि उनले जित हात पार्दै राज्य एकीकरणको अभियानको बलियो आधार तयार पारे । त्यसपछि उनले गोरखाबाट राजधानी काठमाण्डुमा सारे र नयाँ नेपाल अधिराज्य स्थापना गरे । यो अभियान उनको मृत्युपछि पनि रोकिएन ।
पंचायती कालः राणा शासनः वि.सं. १९०३ देखि २००७ सालसम्मको समयमा राणाहरुले नेपालमा पारिवारीक शासन गरेको नेपालको इतिहास छ । त्यस समयमा राणा भाईभाईहरुमा प्रधानमन्त्रीको पद सार्दै जाने प्रचलन थियो । देशका मुख्य शक्तिशाली पदमा राणा खानदानको हैकमी शासन थियो । त्यसबेला देश राणाको इसारामा चल्थ्यो राणाले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगाउतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा अरुलाई कडा बन्देज थियो । यस समयमा जंगबहादुरको नाम निकै चर्चामा थियो । त्यसपछि २००७ मा राणा शासनको अन्त्य हुँदै प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । राणाले गर्दै आएको हुकुमी शासन अन्त्य भयो ।
जनताले राहतको महसुस गरे । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगाएतका क्षेत्रमा सहजता आयो । तर, प्रजातन्त्र लामो समय टिकेन २०१७ पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भयो । वि.सं. २०१५ सालमा भएको संसदीय चुनावबाट निर्वाचित सरकारलाई २०१७ पुस १ गते दिनदहाडै राजा महेन्द्रबाट अपदस्त गरिएको थियो । पञ्चायती शासन स्थापना गरेपछि राजनीतिक दल प्रतिबन्ध गरिए भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बी।पी। कोइराला, उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्य, सांसद, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई रातारात पक्राउ गरियो र जेल हालियो ।
राजनीतिक दलका नेताहरू राजकाज, राज्यद्रोह लगायतका मुद्दामा लामो समय जेल बसे । पञ्चायतले पक्राउ गर्न नसकेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता ठूलो सङ्ख्यामा भारत निर्वासित भए ।
पञ्चायतको स्थापना भएको २–३ वर्षमै देशभरी पञ्चायतको जगजगी फैलियो । पञ्चायतलाई बलियो बनाउने गरी राजालाई सर्वाधिकार सम्पन्न व्यवस्थासहित २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थाका मान्छेहरूले भन्ने गर्दथे कि सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली । उनीहरूले पञ्चायती व्यवस्था र नेपाललाई एक–अर्काका पूरकको रूपमा प्रचार गर्ने गर्दथे । पञ्चायत नरहे देशै रहँदैन भनेर प्रचार गरिएको थियो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई अराष्ट्रिय तत्व घोषणा गरिएको थियो ।
वि.सं. २०४६ मा भएको नेपालको प्रथम जनआन्दोलनमा नेपालका विभिन्न दलहरु एकै उद्धेश्य लिएर आन्दोलनमा होमिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न कम्युनिष्टको समूह संयुक्त बाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा होमिएको थियो । ५० दिने सो आन्दोलनमा पंचायती शासकहरुले निकै दमन गरेका थिए । त्यसपछि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलार्इ पदच्युत गर्दै सांसदसमेत भंग गरी निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागु गरियो ।
तर १८ सालको क्रान्ति, ३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावका कारण २०३६मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले नेपालमा जनमत संग्रह गराए। बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत सँग्रहमा राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो। त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरू गर्यो। अन्तत यो कदम २०४६ मा जनआन्दोलनमा परिणत भयो।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फाल्गुन १ गते जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो । ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं’ भन्ने मूल नाराका साथ जनयुद्धको शुरुवात भएको थियो । रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठविसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरु र गोरखाको च्याङलीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरेर थालनी गरेको जनयुद्धले दस वर्षमा नेपाली समाजमा युगान्तकारी उथलपुथल ल्याइदियो । साँच्चै जनयुद्धका दस वर्ष नेपाली समाजका तीव्र रुपान्तरणकारी वर्षहरु थिए । युगौदेखिको सामन्ती समाजलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको थियो, त्यो जनयुद्धले । त्यस समय राज्य र माओवादी तर्फबाट हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने वेपत्ता भएकाहरुको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
विसं २०५८ जेठ १९ गते राती नारायणहिटी दरवारभित्र भएको रक्तपातपूर्ण गोलीकाण्डमा राजा बीरेन्द्रको परिवारका सबैजनाको हत्या भयो। तत्कालिन युवराज दीपेन्द्रले गरेको भनिएको सो हत्याकाण्डमा राजा बीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र ९एक दिन पछि मृत्यु भएको भनिएको०, राजकुमारी श्रुती, राजकुमार निराजन लगायत राजपरिवारका धेरै जनाको मृत्यु भएको थियो। जसको खुलासा हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ः
दोस्रो जनआन्दोलन नेपालमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जुन १९ दिनसम्म चलेको थियो। यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो।
आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी र शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादीसमेत सम्मिलित भएको थियो। जनआन्दोलन सफल भएसँगै माओवादी जनयुद्धको अन्त्य भएको थियो भने देशमा शान्ती स्थापना भएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणः
जनआन्दोलनसँगै भएको संविधानसभा निर्वाचनमा १० वर्षे युद्धमा होमिएर शान्ति वार्तामा आएको माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । यो संविधानसभाले वि.सं. २०६५ जेठ १५ देखि वि.सं. २०६९ जेठ १५ सम्म कार्य गर्यो। २०६४ साल चैत्र २८ गते भएको निर्वाचनमा दुइृ वर्षमा संविधान निर्माण गरिने भनेता पनि विभिन्न कारणवह त्यो सफल हुन सकेन । यो संबिधानसभामा पहिलो हुने, निर्वाचित हुने सिट अर्थात् प्रत्यक्ष तर्फ २४० जना सदस्यहरु, समानुपातिक सिटका तर्फबाट ३३५ सदस्यहरु र बाँकी २६ जना सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा निर्वाचित गरिएको थियो। पहिलो संबिधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्र राज्यका रुपमा परिभाषित गर्यो।
पहिलो संबिधानसभाले तोकिएको समयमा संबिधान दिन असफल भएपछि यसको म्याद पुनः २ वर्ष थपेर चार वर्ष बनाइएको थियो । चार वर्ष पश्चात २०६९ जेठ १५ गते संविधानको मस्यौदा तयार पार्न असफल भएकाले पहिलो संविधानसभा भंग भयो। दोश्रो संबिधानसभाको सदस्यहरुको निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो। अन्ततः २०७२ असोज ३ गते यसै संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।